ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ6အနက်မှ 1
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာစေပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Relationships လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြားမှာ ရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေး (Relationship) ကို ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေ နဲ့ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေအပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ Relationship​တွေက ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အပေါ်မှာပါ သက်ရောက်နေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက ပိုမို ကျန်းမာကြသလို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက ပိုပြီး အသက်ရှည်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ပြောပြရရင် ပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ ခံစားရနိုင်ခြေ နည်းကြတယ်ဆိုတာပါ။ ဆက်ဆံရေးတိုင်းက ပျော်ရွှင်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာ တစ်ခုက ဆက်ဆံရေးတိုင်းမှာ […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 26/10/2021
အထက်လူကြီးအနေနဲ့ သင့်လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးမလဲ။
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့က ပျော်ပျော်နေတတ်ကြသလို တချို့ကျပြန်တော့လည်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေကြပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ၊ မပျော်ချင်တဲ့သူတော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ပိုမိုပျော်ရွှင်ရဖို့အတွက် အကျင့်ကောင်းတွေ မွေးမြူ ကြည့်ရအောင်။ (၁) ပြုံးပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့အခါ ပြုံးရယ်တတ်တာအကျင့်ပါ။ ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ ပြုံးတဲ့အခါ ဦးနှောက်ကနေ ဒိုပါမင်းဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းထွက်ပြီး ပိုမိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ အတုအယောင် အပြုံးမျိုးကို မဆိုလိုပါ။ မနက် မိုးလင်းတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို မှန်ကြည့်ပြီး ပြုံးပါ။ နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝမှာလည်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေပါ။ (၂) လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပါ။ လမ်းလျှောက်တာမျိုး၊ ယောဂသင်တန်း တက်တာမျိုးနဲ့ အကြောလျှော့တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ပေါ့ပါးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုသာ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် စိတ်ကျခြင်းတွေ ကင်းဝေးပြီး မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား ပျော်ရွှင်လာမှာပါ။ (၃) အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ဖြစ်အောင် အိပ်ပါ။ တစ်နေ့ (၈)နာရီ (၉)နာရီခန့် […]
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ glands လေးတွေကနေ ဟော်မုန်း အမျိုးမျိုးကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထုတ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်းလေးတွေက သွေးကြောလေးတွေကနေတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ အဲဒီဟော်မုန်း အမျိုးမျိုးထဲက Happy Hormone လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဟော်မုန်းလေးတွေ အကြောင်းနဲ့ အဲဒီဟော်မုန်းလေးတွေ ထွက်လာအောင် ဘာတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ စိတ်ခံစားချက်ကို ကောင်းမွန်စေသော ဟော်မုန်း လေးများ ၁။ Dopamine Dopamine လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းလေးကလည်း feel good hormone လို့ တင်စားရလောက်အောင် စိတ်ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေနိုင်တဲ့ ဟော်မုန်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ Serotonin Serotonin က သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ကောင်းစေနိုင်ရုံသာမက သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ အတွက်အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အိပ်တာ၊ […]
FA တွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းစေဖို့ အိမ်ထောင်ပြုတာ၊ ရင်သွေးရတနာ ရယူတာတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။ လူသားတွေရဲ့ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လေ့လာနေခဲ့ကြတာ ကြာမြင့်နေပါပြီ။ ပျော်ရွှင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ၊ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်မလဲပေါ့။ ခုချိန်မှာလည်း သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီ နည်းပညာတက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီအချက်ကို စနစ်တကျ လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ လူပေါင်း တစ်သောင်းခွဲလောက်ကို ၁၄ နှစ်ကြာအောင် စောင့်ကြည့် သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ နေပျော်စေဖို့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းနေစေဖို့ဆိုရင် မိသားစုဘဝရှိဖို့၊ အိမ်ထောင်သားမွေးမှုပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ အဆိုပါသုတေသနအစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဆစ်ဒနီမြို့အခြေစိုက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုတွေအရဆိုရင်တော့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေ၊ မိသားစု ရှိခြင်းမရှိခြင်းတွေဟာ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရေရှည် ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းကြီး သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ လူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေကို […]
အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တချို့ လာမေးထားကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဆောင်းပါးကို ရေးဖို့ အကြံရလိုက်တာပါ။ ၂၁ ရာစုမှာ ကျွန်တော် မြင်ရသလောက် အချစ်ရေး တော်တော်များများ မခိုင်မြဲကြသလို သိပ်ပြီး ပူလောင်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဘာပြဿနာမှလည်း မရှိဘဲနဲ့ ၂ယောက်တည်း တကျက်ကျက်နဲ့ စကားတွေများရတာ၊ ရန်ဖြစ်ရတာ၊ ပြတ်ရတာနဲ့ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က အေးချမ်းသာယာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ ဘယ်လို အမူအကျင့်တွေ တွေ့ရတတ်လဲဆိုတာကို ခုဆောင်းပါးမှာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ လူငယ်တွေလည်း ကိုယ် ဘယ်နေရာက မှားနေလဲ၊ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ ဆက်ဆံရေးက အေးချမ်းနေလား၊ ပူလောင်နေလားဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ ပူလောင်ခြင်း၊ အေးမြခြင်း ရသ ၂မျိုးလုံးကို ခံစားရပါတယ်။ အေးမြခြင်းက […]
ချစ်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်သလို၊ အချစ်ခံရဖို့ဟာလည်း လူသားတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍ တစ်ခုပါ။ ချစ်သူရည်းစား၊ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့မှမဟုတ်ပါဘူး၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ၊ မိသားစု ဝင်တွေနဲ့လည်း ချစ်ခင်မှုတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်းပတ်သက်ဆက်နွယ်ခြင်း၊ တန်ဖိုးထား လေးစားခြင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို အတော်အတန် လျှော့ကျနိုင်ပါတယ်။ အချစ်နဲ့ ကျန်းမာခြင်းဟာ ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် အချစ်ရဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ ကျန်းမာရေးအကျိုးရလဒ်များ (၁) ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရတဲ့ အရေအတွက်နည်းပါးလာနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း အပေါ် လေ့လာချက်တစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ လေ့လာချက်အရ အိမ်ထောင်ရှိသူတွေဟာ ဆေးရုံဆေးခန်း လာပြတာမျိုးသိပ်မရှိကြပါဘူး။ ဆေးရုံတက်ရတာမျိုးရှိခဲ့ရင်တောင် ဆေးရုံတက်ရက်နည်းပါးကြပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုရင်တော့ Relationship တစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာ သင်ဟာကိုယ့်ကိုကို ပိုဂရုစိုက်လာမှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကြောင့် မိမိဟာခံတွင်းကျန်းမာရေး၊ တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကို ပိုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ကြောင့် သင်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့ […]
ချစ်သူဘဝကနေ မိသားစု လေးတစ်ခု စတင်ဖန်တီးတော့မယ်လို့ စဉ်းစားနေပြီလား။ အတွေးထဲက ကြင်စဦးမိသားစုဘဝလေးက အရမ်းကိုလှပနေမှာပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ထဲတော့ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နေရ နေရ ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းပြင်ဆင်ပြီဆိုရင်တော့ ဒီထက်ပိုပြီး လက်တွေ့ဆန်လာပါတော့မယ်။ ဘဝဆိုတာ အချစ်တစ်ခုတည်းမှ မပြီးတာလေ။ ဒါဆို ရှေ့ရေးအတွက် နှစ်ဦးသား ဘာတွေတိုင်ပင်ပြီးပြီလဲ။ စွယ်တော်ရွက်လေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေးကြည့်ရအောင်နော်။ အရင်ဆုံး နှစ်ဖက်မိဘ ကိုအသိပေးလို့ ကြည်ဖြူသဘောတူညီမှုကို ရထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သာယာပျော်ရွှင်ရတဲ့ မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ အရေးပါတဲ့ အချက် တစ်ခု ပါပဲ။ သဘောတူကြတယ် ဆို နှစ်ကိုယ်ကြား တိုင်ပင်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အရေးကြီးဆုံး အချက် (၅) ချက်ကို အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ချစ်သူချင်း ဆက်ဆံရေးကို သုံးသပ်ပါ ကိုယ့်ချစ်သူကို တကယ် ယုံကြည်ပြီလား၊ ယုံလို့ရောရလား သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ပါ။ ယုံကြည်မှု […]
အလုပ်မှာ ပင်ပန်းပြီး ပြန်လာတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်း အမောပြေစေဖို့
သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ဘဝလေး ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး နားလည်ဖို့၊ စာနာဖို့၊ လိုအပ်တာလေးတွေ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း မေတ္တာတွေက ဘယ်တော့မှ ခမ်းခြောက်မသွားဘဲ အိမ်ထောင်သက် ကြာလာလေ၊ အချစ် ပိုတိုးလာလေ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အိမ်ထောင်ရေး သာယာ အဆင်ပြေစေဖို့ အလုပ်ကနေ ပင်ပင်ပန်းပန်း ပြန်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ့်ခင်ပွန်း ရွှေရင် အေးရစေဖို့ ဘာတွေ ဆောင်ရ၊ ရှောင်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ အိမ်ကို သန့်ရှင်းနေအောင် လုပ်ပေးပါ။ ဘယ်သူမဆို တစ်နေ့လုံး ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ပြန်လာရင် ကိုယ့်အိမ်လေးက သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေတာပဲ မြင်ချင်မှာပါ။ အဲ့တော့ တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်းစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလေးတော့ လုပ်ပေးထားပေါ့နော်။ ကိုယ်တိုင်က အချိန်မရှိလို့ တစ်အိမ်လုံး သန့်ရှင်းရေး မလုပ်နိုင်ရင်တောင် […]
မျက်လုံးထဲမှာ ကြယ်တွေ လိုးလိုးလက်လက်မြင်နေသလို၊ ဗိုက်ထဲမှာ လိပ်ပြာလေးတွေတရွရွပြေးနေသလို၊ ဒူးတွေပဲချောင်နေသလိုလို ….တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချစ်ရတယ်ဆိုတာ တယ်တော့ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ခံစားမှုပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချစ်ခံစားမှုဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးသယ်လာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ “ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆောက်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်အပြည့်နဲ့ လုပ်နိုင်လာကြပါတယ်” လို့ AMC ရဲ့ နှလုံးအထူးကုတစ်ဦးဖြစ်သူ Baran Kilical ကပြောပါတယ်။ အချစ်ခံရခြင်း ဒါမှမဟုတ် ချစ်ခြင်းတရားဟာ စိတ်ဖီးစီးမှုအခြေအနေကနေ နှလုံးကျန်းမာရေးအထိ အရာရာတိုင်းကို သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ချစ်ခြင်းတရားဟာ ဘယ်လိုတွေကောင်းကျိုးတွေသယ်လာပေးနိုင်သလဲဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လောထားတဲ့အချက်တွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) အသက်ရှည်စေတယ် သုတေသနတွေအရ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတည်ဆောက်ခြင်းဟာ အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ တိတိကျကျ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အမေရိကန်သုတေသနဂျာနယ်တစ်ခုမှာ အသက် သုံးဆယ်ကနေ […]
ဆိုကြပါစို့။ သင့်အိပ်မက်ထဲထိ လွှမ်းမိုးနေသူတယောက်ဟာ သင့်ဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ် လျှောက်လာခဲ့ရင် မည်သို့ ခံစားရပါမည်လဲ။ သင့်ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖဝါးတွေမှာ ချွေးစို့ကောင်းစို့လာနိုင်ပါတယ်။ စကားတလုံးမှ ပြောမထွက်ဘဲ ရှက်ရွံ့သလိုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင်ချစ် မြတ်နိုးရသူတဦးကို မြင်တွေ့ရချိန်မှာ တပြိုင်တည်းခံစားရနိုင်တဲ့ အရာတွေဖြစ်ပြီး အားလုံးဟာ သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ပျက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အားလုံးဟာ သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ ဓာတ်ပြုပြောင်းလဲခြင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးနှောက်ထဲမှာ အာရုံကြောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ များစွာရှိပါတယ်။ သမီးရည်းစားပိုးပမ်းခြင်း၊ မိမိစိတ်ဝင်စားသူကို ဆွဲဆောင်ခြင်း စတဲ့နေရာတွေမှာ ဓာတ်ပြုဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါဓာတ်ပြုပြောင်းလဲတဲ့ အာရုံကြောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပေါ် မူတည်ပြီး သင့်ရဲ့အတွေးအကြံ၊ စိတ်ခံစားချက်၊ အပြုအမူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အတွေးအကြံတွေကို အဓိကကြိုးကိုင်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ ဒိုပါမင်း၊ အောက်ဆီတိုစင်နဲ့ ဗေဆိုပရပ်ဆင် […]
ချစ်ရေးချစ်ရာမှာ နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက် ဘယ်အရာက ပိုအရေးကြီးသလဲဆိုတာမျိုး မကြာခန တွေးဖြစ်ကြတယ်။ ချစ်မိပြီဆိုရင် အရာရာကို နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ကြတာများတယ်လို့လည်း ဆိုစကားတွေရှိကြတယ်။ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ချစ်သူက တားလို့ အရက်မသောက်တော့ပဲ ဖြတ်လိုက်တာတို့၊ လိမ္မာသွားတာတို့၊ Bonnie’N’Clyde တို့လို့ အတူလက်တွဲပြီး ပေတေလေလွင့် ဆိုးခဲ့ကြတာတို့။ အချစ်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း၊ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိမ်းချုပ်စေခိုင်းနိုင်သလား။ ဒါအမှန်ပဲလား။ အချစ်က ဦးနှောက်ကို ထိမ်းချုပ်နိုင်တာလား? ခန္တာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုရော အချစ်က သက်ရောက်နိုင်တာလား? ဟုတ်ပါ့မလား? သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုတွေက အချစ်ဟာ လူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြထားနိုင်နေပါပြီ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ် ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုများ အထောက်အကူပြုပါသလဲ။ ချစ်မေတ္တာက လူ့ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုတဲ့ အချက် ၇ […]
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်သူ